Iingcebiso ezi-3 zoRhwebo eziDibeneyo zeNtengiso
NgoLwesine, Aprili 14, 2016 NgoLwesibini, Aprili 12, 2016 U-Muhammad Yasin
Alithandabuzeki elokuba ukuthengiswa kwedijithali lirhamncwa elinamandla- kunye nesilo esinye esijiyayo kuloo nto. Kangangokuba sonke singathanda ukucinga ukuba ukuthengisa ngokwedijithali kuyafana nokuba kwenzeka ntoni, ngokuqinisekileyo akunjalo- kwaye izizathu zicacile. Njengeshishini, unokukhetha ukunikezela ngeepesenti ezithile zexesha lakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali kwiintlobo ezahlukeneyo zentengiso yedijithali: imidiya yoluntu, iPPC, ukuphinda ujonge, ukuthengisa ividiyo, ukuthengisa nge-imeyile, i-SEO, ukusetyenziswa kwesixhobo sewebhu njalo njalo.
Okwangoku, eyona nto inomdla wokuyijonga yindlela amashishini ahlukeneyo abeka phambili ngayo izicwangciso zokuthengisa zedijithali. Ngenxa yokuba amashishini ahlukeneyo ngokucacileyo aya kuba neenjongo ezahlukeneyo zeshishini, zizixhobo ezithile kunye namaqonga anokuthi afumane ezo ziphumo ziya kuthi zixhaswe. Kwaye kunomdla ngakumbi ukubona indlela amashishini ahlukeneyo aziveza ngayo kwi-Intanethi kunye nendlela ezifumaneka ngayo kubathengi nakwithemba.
Ngaphezulu kwekhondo lam lomsebenzi, ndidibene nabantu abaninzi kwintengiso kumashishini amaninzi ahlukeneyo. Ngexesha lokudibana kwam, ndiye ndafunda isixa esikhulu malunga neendlela zokuthengisa abazisebenzisayo ukufezekisa iinjongo zabo. Njengoko bekulindelekile, uninzi lwezicwangciso ezisetyenzisiweyo zalungiselelwa ezo mveliso ezithile-ewe, ziphumelele. Ukuba ungumakethi nakweyiphi na imizi-mveliso engezantsi, uya kufuna ukuqhubeka ufunda. Nazi iingcebiso ezi-3 ezisebenzayo zentengiso yedijithali yamashishini amathathu awodwa:
Izandla ezantsi, lelinye lawona mashishini anobuqhetseba kwintengiso yishishini lezonyango. Esona sizathu siphambili soku kukuba awukwazi ukwenza amabango anesibindi afana nolu “lonyango oluthile luya kukunyanga kwisifo sakho.” Kwiimeko ezininzi, ungakhankanya kuphela ubungqina bokuba oku kuncede inani elibalulekileyo labantu (Ex: "olu nyango lunama-98% olusebenzayo"), okanye LUNOKUNCEDA. Ngokucacileyo, lo ngumcimbi we-100% osemthethweni.
Okwangoku, nangothintelo oluza nokuvelisa imiyalezo evunyiweyo ngokusemthethweni, izibhedlele, iiklinikhi kunye nezinye izibonelelo zonyango zisenethuba elihle (kunye nokuguquguquka ngokwaneleyo) ukuba "babambe izinto zabo." Enye yeendlela ezilungileyo zokwenza oku kumzi mveliso wezonyango kukuzilungiselela kwaye ubonise inkathalo. Ukhathalelo lwempilo yinto ebaluleke kakhulu; Ke kutheni ungahambi imayile eyongezelelweyo ukubonisa ukuba abathengi bakho (okanye abaguli, endaweni yoko) bakwimfuno yakho.
Nangona umbutho wakho kufanele ukuba ubonakalise la maxabiso obuntu kwiwebhusayithi kunye nolunye uqinisekiso lokuthengisa, imithombo yeendaba zentlalo yindlela elula kakhulu yokufumana rhoqo loo miyalezo yokukhathalela abaguli abatsha nabangoku. Kunye nezibhengezo zolawulo ezisemgangathweni (Ex: Le ofisi izakuvalwa kulwakhiwo. Okanye uGqirha Williams uphume eofisini), umququzeleli wakho weendaba zosasazo angahamba umgama owongezelelekileyo kwaye abelane ngamanqaku ngokuhlala usempilweni ebusika, okanye ukubonelela ngeengcebiso ngokubanzi ukuhlala usempilweni kumsitho wasekhaya (Ex: Ukwenza ukhetho olusempilweni kwi-State Fair). Nditsho nokwabelana ngeefoto ezintle zinokwenza ukuba abaguli bazive bekhululeke ngakumbi ngophawu lwakho-njengefoto yamaGosa amaPolisa eshiya idonathi kubasebenzi abongikazi ngexesha leempelaveki zeBIG. Zizinto ezincinci eziza kwahlula umbutho wakho kwezinye. Induduzo # 1 yokuziva izigulana zifuna ukuziva xa zikhangela ugqirha wokhathalelo oluphambili okanye ukuthatha isigqibo sokuba bazakwenzelani uqhaqho.
Njengomzi mveliso wezonyango, ushishino lweemoto lukhuphisana kakhulu… mhlawumbi lukhona nokhuphiswano ngakumbi. Ngokuqinisekileyo abantu banokukhetha ukuba zeziphi na izibhedlele kunye neeklinikhi abafuna ukuya kuzo, kodwa xa kutyhalwa kuza kutyholwa, ukuba unongxamiseko, uza kuya kwesona sibhedlele sikufutshane kuqala. Izibhedlele zihlala zihlala zivulekile-kodwa ezinye ziya kwenza ngcono, kwaye zibe negama elingcono kunezinye.
Kule mihla nakwiminyaka, nangona kunjalo, ishishini leemoto lilungile njengobukho bayo kwi-Intanethi. Ngenxa yokuba iimoto zinotyalo-mali olukhulu, abathengi benza uphando oluninzi kwi-intanethi njengabantu- okubandakanya ukuphonononga iwebhusayithi yakho yomthengisi ukusuka phezulu kuye ezantsi. Oko kwathethi, ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba abathengi bakho bahlala bebandakanyeka kwiwebhusayithi yakho kuhambo lwabo lokuthenga iimoto, kuya kufuneka unike ingqalelo engakumbi kwintengiso yemoto kwintengiso ye-Intanethi; kwaye ugcine lonke uluhlu lwakho lwezinto kunye nokunyuselwa kuhlaziyiwe. Abantu abanalo ixesha lokufowunela ukuthengisa kwakho kwaye babuze ukuba ikhona into ekhoyo okanye ukunyusa kusaqhubeka. Ukuba kukho into ekhoyo kwiwebhusayithi yakho, abathengi bayayilindela ukuba ibe kwiqashiso. Ukongeza, abathengi bafuna ukwazi ukusebenzisa yonke into ekhoyo ngoku kwigumbi lakho lokubonisa. Xa abathengi bebona isithuthi abanomdla kwi-Intanethi, amathuba alungile aya kuhamba kukhetho lwabo oluphezulu lweemoto ezi-3; Qiniseka ukuba indawo yakho ayibuyi mva.
Umzi wokugqibela, kwaye ophikisana nomceli mngeni omkhulu endiza kuxoxa ngawo yiShishini lokutyela! Isizathu sokuba nditsho ukuba "owona mceli mngeni" kungenxa ye- Isixa esikhulu sokugcina siyimfuneko Ukusingatha lonke uphononongo lwe-Intanethi, amagqabantshintshi nezikhalazo ezivela kubathengi kulo lonke uluvo lweemvakalelo. Kwaye njengoko usazi, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo umba werestyu usonjululwe, kungcono ukuba igama labo libe kwi-Intanethi nakwi-intanethi. Ngenxa yokuba kulula kangakanani ukuthumela ingxelo kwi-intanethi, kwiivenkile zokutyela kufuneka benze yonke imizamo yokuphendula kuwo onke amagqabantshintshi nangaliphi na ithuba lomntu - elifanelekileyo okanye elibi! Kwakhona, kancinci kuhamba indlela ende yokuguqula umntu abe ngumthengi ebomini.
Amaqonga eendaba ezentlalo afana neFacebook avumela abasebenzisi ukuba babekeke esidlangalaleni imibutho, kunye nokushiya uphononongo. Ukuba ungumphathi wephepha, uya kufumana izaziso kwangoko xa umntu eshiya uphononongo kwiphepha lakho. Ukushiya umbono oqinisekileyo kubo, eyona nto intle kwaye inesidima ukuyenza kukuphendula kubo ngaphakathi kweeyure ezingama-24-ngakumbi ukuba kukuphononongwa okungalunganga. Xa abathengi bakubushushu bomzuzwana, bafuna izinto zisonjululwe ASAP.
Ukuba uphendula kuhlolo olubi, bona ukuba ungazenza njani izinto ngcono. Ukuba uphononongo oluqinisekileyo, thatha ixesha ukubabulela ngexesha elifanayo. Abasebenzisi ababoni kuphela ukubonwa kwabathengi bakho, kodwa bakwabona nendlela obaphatha ngayo. Nokuba uphononongo aluchanekanga okanye akunjalo, indlela oziveza ngayo kumthengi kuthetha umahluko phakathi kwegumbi eligcweleyo labantu abalinde itafile; kunye nomthengi rhoqo kwiiyure ezi-2. Ubungcali yinto yonke! Abahlaziyi bamkelekile ukuba baphendule kubathengi kwezinye iisayithi zokuphononongwa njengeYelp kunye neUrbanspoon.
Ngelixa kuyinyani ukuba imiba eyahlukeneyo yentengiso yedijithali inokusetyenziswa phantse ngumbutho, iintlobo zamaqonga entengiso yedijithali kunye neendlela ezisetyenziswayo ziyahluka kakhulu ngokusekwe kumzi mveliso. Into ethathelwa ingqalelo ibalulekile kwishishini elinye isenokungabi yinto ebaluleke kakhulu kwenye. Amashishini ahlukeneyo aneenjongo ezahlukeneyo, kwaye ke, iindlela ezahlukeneyo zokuthengisa kubathengi kwi-Intanethi.
tags: intengiso yezithuthiukuthengiswa kwedathaushishino lwentengiso yedijithaliurhwebo loshishinointengiso yezonyangoyokuthengisa yokutyelaUphando lwezoPhandoImidiya yokuncokolaSocial Media Marketing
Izifundo ezili-12 zifakwe kuBunini obuGqithisileyo ukuya kwiNtengiso
Ukuvala uLwahlulo lweNtengiso yeDijithali
Jul 15, 2016 ngo-4: 05 AM
Oku kungqina ukuba ukuthengisa kwidijithali akusosihloko nje esincinci kodwa kubanzi kwaye kubhetyebhetye. Itekhnoloji yentengiso yedijithali ichaza ubunyani behlabathi lentengiso. Icandelo lonyango, elezithuthi kunye neendawo zokutyela bambalwa kwezona mveliso zihamba phambili kwihlabathi. Ngale nto, ndingavuma ukuba ukuthengiswa kwedijithali kuthathe inqanaba elitsha.